Kubalulekile ukubuka izigaba zempilo yebhizinisi - Bayede News
Selikhulile ibhizinisi lakwa-Edgars. Inkampani ebala iminyaka esondela ekhulwini iphila singayithatha njengenkampani enamandla. Nayo leyo nkampani ibizihlola minyaka yonke, ixilongwe ukuze ihlale iphila. Ochwepheshe ekuhlaziyeni ukusebenza kwamabhizinisi balichaza njengento ephilayo ibhizinisi. Linezigaba ezithile noma amazinga athile abalulwayo empilo. Ibhizinisi eliphilayo liyazalwa likhule lifike ebudaleni, bese kudingeka livuselelwe impilo. Lokhu kwenzeka liqhubeka lisebenza ngaphandle kokuthikamezeka kokusebenza kwalo. Abanye bazibala zibe zine lezi zigaba zokukhula kwebhizinisi kanti abanye baze bafike kweziyisithupha. Lezi zigaba zokukhula kwebhizinisi kusemqoka kubanikazi bebhizinisi ukuba baziqaphele. Okwenza kungabi lula ukuzibona wukuthi azifiki ngesikhathi esifanayo kuwo wonke amabhizinisi. Elinye ibhizinisi kungalithatha iminyaka emihlanu ukufinyelela esigabeni sesibili sokukhula kanti elinye singaba sifushane noma sibe side kunalokho isikhathi.
Uma uqaphela ziyabonakala izimpawu lapho lisebenza kahle ibhizinisi nalapho selehla. Ngaso sonke isikhathi abanikazi bebhizinisi kumele basebenze balungiselele isigaba esilandelayo. Uma isigaba esilandelayo sokukhula kwebhizinisi sibafica bengasilungiselele kungasho ukuwa kwalelo bhizinisi, kumbe ukwehla kwezinga eliphumelela ngalo.
Kulezi zinyanga ezimbalwa ezidlule bekunezinkulumo zokuthengiswa kwengxenye yezitolo zakwa-Edgars ezingaphansi kwenkampani i-Edcon. Emva kweminyaka engama-91 izitolo zakwa-Edgars zikhona, kufinyelelwe esivumelwaneni nenkampani iRetailability ukuthi izothatha izitolo ezili-130 kulezo ezili-194 zakwa-Edgars. Phakathi kwezinto ezimisele ukuzenza iRetailability wukuvuselela udumo lwezimpahla zakwa-Edgars, bahlolisise izindlela ezizobuyisa udumo lwezitolo zakwa-Edgars. Kungenzeka ukuthi i-Edgars ificwe yisigaba sokugcina emjikelezweni webhizinisi, lapho kwehle idumela lemikhiqizo ebeyikade ikhonzwe kakhulu ngabantu, kwaqhamuka ezinye izitolo ezintsha abanikazi be-Edgars babona luya ngokwehla idumela lezimpahla zabo.
Isigaba engifisa sisibukele eduze yiso leso esithathwa njengesokugcina empilweni yebhizinisi. Leso sigaba yilapho ibhizinisi liqeda ukudlula esigabeni esiyisicongo seliqala ukuphelelwa ngamandla, liye ngokuya lehla ekusebenzeni kwalo. Isigaba esandulela esokugcina kulapho ibhizinisi lisesicongweni, konke kuhamba kahle, likhombisa ukuthi konke kuhlelekile. Uma kungelikhiqizayo, umkhiqizo usuke uhamba kahle uthengwa ubuthaphuthaphu, amakhasimende engacabangi kaningi uma efuna ukuthenga lowo mkhiqizo. Kubalulekile kubanikazi bebhizinisi ukusibona lesi sigaba ngoba siya ngokuya siguquka, abantu baqale baye kwezinye izindawo befuna umkhiqizo omusha, kuthi umkhiqizo obewuyintandokazi kube sengathi awusathandwa. Ngaleso sikhathi amandla ebhizinisi abukeka ehla, imali engenayo yehle, kudingeke ukuba abanikazi bebhizinisi balivuselele, bavukuze izindawo ezithile ukuze lizalwe kabusha.
Lesi sigaba sokugcina siyithuba lokubuyekeza imikhiqizo kanti kwabanye yisikhathi lapho bediliza izisebenzi bafake izinhlelo ezintsha ezizokwenza kube sengathi yibhizinisi elisha. Kungalesi sikhathi lizalwa kabusha ibhizinisi kuyaye kucace ukuthi ibhizinisi linomjikelezo oyizigaba okubalulekile ukuwuqaphela, ukuze ungafiki abanikazi bengazelele.
Ngenkathi kuqala isigaba sokugcina amanye amabhizinisi afaka umkhiqizo omusha, kumbe adayiswe kuqhubeke abanikazi abasha abazofika nomqondo omusha, ongezukuxosha abanikazi abadala. Lezi zigaba azenzeki ebhizinisini kuphela, kwesinye isikhathi kuba wumkhiqizo ofinyelela esicongweni abantu baye ngokuya bewushiya, bazame emisha. Kungakho amanye amabhizinisi eshintsha imibala noma indlela aziveza ngayo kubantu.
Ukufika kwesiphepho esifuze ukhuvethe kuba nomthelela ongefani kulelo nalelo bhizinisi. Abanye babahlaziyi abebebuka izitolo i-Edgars ezingaphansi kwenkampani i-Edcon bathi lezi zitolo bese zisesigabeni sokugcina, lapho abanikazi bebhekene nokwehla kwenani labathengi. Ukuqala kokhuvethe akubanikanga ithuba lokuzilungisa kabusha, isitolo sizalwe kabusha. Bekufanele bakhethe phakathi kokudayisa isitolo kubanikazi abasha noma bavale iminyango izisebenzi ezingaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu ziphelelwe wumsebenzi.
Kubukeka bekwazile ukwedlulisela kwabanye abanikazi abazoziqala kabusha lezi zitolo, benomqondo ozothandwa ngabathengi. Okubalulekile kubanikazi abasha wukuthi bazobaphatha kanjani abathengi abebethembekile ku-Edgars omdala. Phela i-Edgars beyikweletisa ngempahla, abathengi benethuba lokukhokha kancane kancane. Kungenzeka izinguquko zifake impahla entsha engezukuthandwa ngabathengi abadala, kanti futhi kungenzeka ukuba kungene abathengi abasha abahehwa yizinguquko ezenzekile ngokungena kwabanikazi abasha.
Inkampani i-Edcon bese kuyisikhathi eside inezinkinga kubonakala ukuthi izinto azisenzeki njengoba bezenzeka isitolo sisekuvuthondaba. Yisikhathi esifikayo kumabhizinisi amaningi lapho kubukeka sengathi kukhona ukuphambana kwezinto, kanti sekudingeka kubuyekezwe indlela yokwenza ibhizinisi lizalwe kabusha. Uma lizalwe kabusha laphumelela kwaba nozinzo, usuke uphelele umjikelezo webhizinisi, ochazwa ngabeluleki bamabhizinisi. Kubalulekile ukuba abanikazi bebhizinisi balihlole, bahlale beqaphelisisa ukuthi izimpawu zokusebenza kwebhizinisi ziliveza likusiphi isigaba. Kungakho kuba nesikhathi lapho iziphathimandla ziba nesikhathi sokubuyekeza imigomo zibuke ukusebenza kwebhizinisi, okungenani kube kanye ngonyaka.